Ulwazi oluneenkcukacha malunga neempazamo ze-CHECKDB "Iphepha lokwabiwa kwe-Index (IAM) likhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM"
Ikhaya iimveliso DataNumen SQL Recovery Impazamo ye-CHECKDB: Imephu yokwabiwa kwesalathiso (i-IAM) Iphepha libonakaliswe kwisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM
Ulwazi oluneenkcukacha malunga neMpazamo ye-CheckDB "Iphepha lokwabiwa kwesalathiso (i-IAM) iphepha likhonjiswe kwisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM"
Nksg 8921, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Jonga kuphelisiwe. Ukungaphumeleli kwafunyanwa ngelixa kuqokelelwa iinyani. Mhlawumbi i-tempdb ngaphandle kwesithuba okanye itafile yenkqubo ayihambelani. Jonga iimpazamo zangaphambili.
Nksg 8998, iNqanaba 16, i-State 2, i-Line 8
Iimpazamo zamaphepha kwi-GAM, SGAM, okanye kumaphepha e-PFS athintela ulwabiwo lwentembeko yolwabiwo kwiziko ledatha elinamaphepha angama-39 ukusuka (1: 0) ukuya (1: 8087). Bona ezinye iimpazamo ngesizathu.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 zokungaguquguquki ezingahambelani nayo nayiphi na into.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 157) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 3, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 196608, ulwahlulo lweeyunithi ID 196608 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysrscols' (into ye-ID 3).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 131) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 5, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 327680, ulwahlulo lweeyunithi ID 327680 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysrowsets' (into ID 5).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 21) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 7, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 458752, ulwahlulo lweeyunithi ID 458752 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Ukulungiswa kwale mpazamo kufuna ukuba ezinye iimpazamo zilungiswe kuqala.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 18) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 7, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949953880064, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949953880064 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysallocunits' (into ye-ID 7).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 12) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 8, isalathiso ID 0, isahlulelo se-ID 524288, ulwahlulo lweeyunithi ID 524288 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysfiles1' (into ID 8).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 137) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 20, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474978021376, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474978021376 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysdbfiles '(into ye-ID 20).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 152) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 23, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474978217984, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474978217984 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysphfg' (into ID 23).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 154) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 24, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474978283520, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474978283520 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysprufiles' (into ye-ID 24).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 92) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 27, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474978480128, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474978480128 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 96) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 27, isalathiso ID 3, isahlulelo se-ID 844424931901440, ulwahlulo lweeyunithi ID 844424931901440 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-3 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'ii-syssersers' (i-ID yento 27).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 102) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 29, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474978611200, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474978611200 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysprivs' (into ye-ID 29).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 117) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 34, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474978938880, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474978938880 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 123) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 34, isalathiso ID 4, isahlulelo se-ID 1125899909070848, ulwahlulo lweeyunithi ID 1125899909070848 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-4 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysschobjs' (into ye-ID 34).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 108) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 41, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474979397632 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 245) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 41, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949956108288, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949956108288 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.syscolpars' (into ye-ID 41).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 10) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 44, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474979594240, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474979594240 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 286) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 44, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949956304896, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949956304896 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysnsobjs' (into ID 44).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 76) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 50, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474979987456, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474979987456 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 292) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 50, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949956698112, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949956698112 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 294) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 50, isalathiso ID 3, isahlulelo se-ID 844424933408768, ulwahlulo lweeyunithi ID 844424933408768 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-3 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysscalartypes' (into ye-ID 50).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 125) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 54, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474980249600, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474980249600 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 284) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 54, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949956960256, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949956960256 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo ezimbini zolwabiwo kunye neempazamo ezi-2 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysidxstats' (into ye-ID 0).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 141) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 55, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474980315136, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474980315136 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 55) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 55, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949957025792, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949957025792 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysiscols' (into ID 55).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 13) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 58, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474980511744, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594037993472 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 84) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 58, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949957222400, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594038059008 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysbinobjs' (into ID 58).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 129) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 60, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474980642816 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1:45) ikhonjwe kwisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo ID 71776119065149440 (chwetheza idatha yeLOB) , kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysobjvalues' (into ID 60).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 88) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 64, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474980904960, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474980904960 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 243) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 64, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949957615616, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949957615616 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysclsobjs' (into ID 64).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 15) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 69, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474981232640, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594039697408 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 39) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 69, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949957943296, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594039762944 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 290) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 69, isalathiso ID 3, isahlulelo se-ID 844424934653952, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594039828480 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-3 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysrts' (into ye-ID 69).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 98) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 74, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474981560320, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474981560320 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 100) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 74, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949958270976, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949958270976 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'syssingleobjrefs' (into ID 74).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 104) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 75, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474981625856, ulwahlulo lweeyunithi ID 281474981625856 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 106) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 75, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949958336512, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949958336512 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysmultiobjrefs' (into ID 75).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 33) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 90, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474982608896, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594038583296 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 81) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 90, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949959319552, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594038648832 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysqnames' (into ID 90).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 49) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 91, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474982674432, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594038779904 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 35) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 91, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949959385088, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594038845440 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysxmlcomponent' (into ID 91).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 83) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 92, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474982739968, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594038976512 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysxmlfacet' (into ID 92).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 130) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 93, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474982805504, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594039107584 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 22) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 93, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949959516160, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594039173120 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysxmlplacement' (into ID 93).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 114) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 97, isalathiso ID 1, isahlulelo se-ID 281474983067648, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594038190080 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 134) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 97, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949959778304, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594038255616 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-2 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysbinsubobjs' (into ID 97).
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 99, isazisi ID 0, isahlulelo ID 0, isabelo secandelo ID 6488064 (uhlobo lwenkqubo yolwabiwo lwenkqubo), iphepha (57311: 268369920). Uvavanyo (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) aluphumelelanga. Amaxabiso angama-2057 kunye no -4.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo ezi-5 zolwabiwo kunye neempazamo ezingama-28 kwitheyibhile '(i-ID yento 99)' (i-ID yento 99).
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 120) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 245575913, isalathiso ID 0, isahlulelo se-ID 72057594040549376, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594045792256 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1:118) ikhonjwe kwisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 245575913, isalathiso se-ID 0, isahlulelo se-ID 72057594040549376, isabelo secandelo ID 72057594045857792 (chwetheza idatha yeLOB) , kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 126) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 245575913, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 72057594040614912, ulwahlulo lweeyunithi ID 72057594045923328 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-3 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'TestTable' (into ye-ID 245575913).
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-58 kunye neempazamo ezi-28 zokungaguquguquki kwindawo yedatha 'xxxx'
apho 'i-xxxx' ligama ledatha eyonakeleyo ye-MDF elungiswa.
Le yimpazamo yolwabiwo kuba kukho iingxaki ngamaphepha e-IAM, ahambelana UMsg 2575 mpazamo.
Idatha ekwifayile ye-MDF igcinwe njengamaphepha, iphepha ngalinye liyi-8KB. Imephu yokwabiwa kwe Index (IAM) isetyenziselwa ukwaba amaphepha kwiFayile ye-MDF, kwaye adityaniswa njengoluhlu.
Ukuba i-DBCC CHECKDB iyalela ukuba uluhlu oludibeneyo lwamaphepha e-IAM alusebenzi kwaye alunakulungisa ingxaki, iya kuthi inike ingxelo ngale mpazamo.
Isampulu iifayile ze-MDF ezonakeleyo eziza kubangela Iphutha le-Msg 2575:
SQL Server 2014 Impazamo2.mdf Impazamo2_fixed.mdf